Guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa maanta oo taariikhdu tahay 13 January 2022 waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dalka ka jirto xaalad abaareed oo baahsani, taas oo saamaysay dad tiradoodu gaadhayso 810,000 (Siddeed boqol iyo toban kun) oo qof.
Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylice).
Madaxweyne ku xigeenka JSL.
Gudoomiyaha Hay'adda NADFOR oo shir la yeeshay Hay'adaha Caalamiga ah.
Gudomiyaha Hay’adda u diyaar Garowga Aafooyinka iyo kaydka Raashinka Qaranka JS...